Ụgwọ nke ụlọ ọrụ WINBY INDUSTRY & TRADE LTD
Ọkachamara Imepụta Candle Maka afọ 20
Kandụl na-esi ísì ụtọ
Kandụl na-esi ísì ụtọ Tumbler
Pudding ite kandụl
Mason jar kandụl
Kandụl tin na-esi ísì ụtọ
Kandụl karama mmanya
Kandụl na-esi ísì ụtọ seramiiki
Kandụl ndị ọzọ
Ọrụ aka na kandụl okike
Onyinye kandụl na-esi ísì ụtọ
Ihe njide kandụl iko
Tumbler kandụl ite
Kalama mmanya maka kandụl
Ụgbọ kandụl ndị ọzọ
Ihe njide kandụl igwe
Ihe njide kandụl seramiiki
Ihe njide kandụl wax
Ihe njide kandụl ciment
Enweghị ọkụ aromatherapy
Nkume na-esi ísì ụtọ
Ngwa kandụl DIY
Ihe ndị ọzọ maka kandụl
Otu esi edozi tunneling na kandụl ọkacha mmasị gị
Tupu ịme ihe ọ bụla, jide n'aka na ọwara mmiri bụ ezigbo nsogbu. Ụfọdụ kandụl ndị yiri ka ọ na-agbagharị na-ata ahụhụ site na olulu mmiri. kandụl nke dị ka ọ tunneled mana n'ezie nwere nsogbu crater Ị nwere ike na-ekwukarị na nsogbu ahụ sitere na CRATERS na ọ bụghị TUNNELING mgbe ihe abụọ ...
Otu esi edozi ma gbochie ọwara kandụl
Ọwara kandụl bụ ihe na-eme n'ọkụ kandụl na-agbaze n'etiti kandụl ahụ na-agbazeghị wax niile gbara ya gburugburu, na-ahapụ oghere nke wax siri ike n'akụkụ ọnụ nke akpa ahụ. Ọkụ dị na wick na-emepụta "ọwara" kwụ ọtọ n'akụkụ ala ka ọ na-ere ọkụ, na-ahapụ ọtụtụ w ...
2021 usoro ọhụrụ nke kandụl ịhịa aka n'ahụ amalitela
2021 usoro ọhụrụ nke kandụl ịhịa aka n'ahụ bidoro Anyị bidoro kandụl na-esi ísì ụtọ maka kandụl SPA na kandụl seramiiki okomoko, biko chọta kandụl ịhịa aka n'ahụ ọhụrụ na-esi ísì ụtọ n'okpuru, maka nkọwa ndị ọzọ biko kpọtụrụ anyị.
Ihe ngosi Canton nke 129
site admin na 21-04-22
Ihe ngosi Canton dị n'ịntanetị nke 129 gbasara ihe ịchọ mma ụlọ mepere na Eprel 15, Oge Beijing. Na ngosi a, anyị wepụtara ọtụtụ ngwaahịa ọhụrụ ma e wezụga kandụl ndị na-esi ísì ụtọ na arịa kandụl iko, gụnyere kandụl beeswax, kandụl ogidi na kandụl nka. Ma ruo ugbu a, ihe ngosi a bụ ...
Agba ewu ewu Banyere ụgbọ mmiri kandụl
site admin na 21-03-22
Ụgbọ kandụl iko na-aghọwanye ndị ahịa na-ewu ewu. Ha na-amasị ime ka iko ite dị iche iche na agba, dị ka odo, na-acha ọcha, nwa, pink, wdg Jiri yi iko containers mee N'onwe gị ọkacha mmasị scented kandụl ihe tinye fun ndụ. N'oge a, anyị nwere ...
Ntuziaka Ime Kandụl
site admin na 21-03-01
Kedu ka esi eme kandụl ite iko? Nke mbụ, biko kwadebe ihe niile maka ịme kandụl na-esi ísì ụtọ Soy wax, mmanụ na-esi ísì ụtọ, arịa kandụl, ihe mmado wick, wick centering Device, ite, kandụl ịji akwa Nzọụkwụ 1: Kwadebe arịa kandụl gị ihe anyị ga-...
Nlebanya ndị ahịa
site admin na 21-02-07
Mgbe ogologo oge nke mmepe na ụlọ ọrụ kandụl, anyị Winby kandụl achịkọtara ọtụtụ ndị ahịa ma nata otuto dị elu site n'ọtụtụ mba. Ndị a bụ njirimara ụfọdụ ndị ahịa nwere maka ngwaahịa na ọrụ anyị. ▶ nke a dị egwu, a nwalekwara m kandụl m…
Ihe omume ụlọ ọrụ
site admin na 21-01-28
Anyị mere nzukọ kwa afọ anyị n'izu gara aga, ọ bụ oge na-akpali akpali, nke onye ọ bụla n'ime anyị ka nwere ike icheta. Bọdụ ndabere ahaziri nke ọma maka nzukọ kwa afọ. Onye ọ bụla na-eji ejiji na-eje ije na uwe ha kacha mma. Ọ nweghị mmetụta nke ozugbo gbasara nnukwu s...
site admin na 20-11-19
Ụlọ ọrụ Winby candle bụ ụlọ ọrụ ọkachamara na-emepụta kandụl ndị na-esi ísì ụtọ, ite kandụl, kandụl ogidi na kandụl nka. Anyị esonyela na ngosi Canton ọtụtụ afọ, wee dọta ọtụtụ ndị ahịa si n'ọtụtụ mba gburugburu ụwa. Ruo ugbu a, anyị ka bụ isi...
Akpachara anya maka ite iko
Akpachara anya maka iji ite kandụl iko : Winby glass candle ite a nwalere nke ọma ma nyochaa tupu ha apụ n'ụlọ ọrụ mmepụta ihe. N'agbanyeghị nke ahụ, mgbe ị na-eji ya, ị ka kwesịrị ịṅa ntị na: ☞Biko wepụ ihe nkwakọ ngwaahịa nke ọma ka ị ghara ịhapụ mkpịsị aka ma ọ bụ ncha na ...
Iji kandụl na-esi ísì ụtọ
Okwu mmalite nke kandụl na-esi ísì ụtọ Kandụl Aromatherapy aghọwo ụzọ isi gbanwee ụtọ ndụ. Kandụl ndị na-esi ísì ụtọ na-esi ísì ụtọ na-esi ísì ụtọ. Kandụl ndị na-esi ísì ụtọ bụ ụdị kandụl ọrụ nka. Ha bara ọgaranya na ọdịdị mara mma na agba. Osisi eke ess...
site admin na 20-09-03
A nwalere ite kandụl nke enyo enyo nke ọma wee lelee ya tupu ebupu ya. N'agbanyeghị nke ahụ, mgbe ị na-eji ya, ị ka kwesịrị ịṅa ntị na: ☞ Biko wepụ ihe mkpuchi ahụ nke ọma ka ị ghara ịhapụ mkpịsị aka ma ọ bụ ncha n'ite ahụ. ☞ N'ozuzu, a na-efesa iko iko ahụ na mmiri-base ...
Akwụkwọ akụkọ Nọrọ na nche maka mmelite
4-E-428, Ndagwurugwu Sayensị Ike, Nke 3088 Lekai North Street, Baoding, Hebei, China
© Nwebiisinka - 2019-2021: Ikike niile echekwabara.